ကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္က chairman ္ဌ Anand Patel ကဘာပြောခဲ့သနည်း။
MD ရဲ့ စာရေးခုံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ MD ၏စားပွဲခုံ
အသုံးပြုသူအတွက်အသုံး0င်ရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သော0က်ဘ်ဆိုက်အသစ်သို့ကြိုဆိုရန်အတွက်ကြီးမားသောပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသည်,. မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံရန်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိပါ, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်ကာလဖိအားပေးမှုများနှင့်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်သည်.
ကျွမ်းကျင်မှုသည်အဖွဲ့အစည်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုတသမတ်တည်းရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဖက်ပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုခံယူသူထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်အစွန်းကိုအစွန်းပေးခြင်းပါ0င်သည့်ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအနက်အကောင်းဆုံးပါ0င်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်ခြင်း. ရွှင်လန်းမှုနှင့်အိမ်၏အပြန်အလှန်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးတာဝန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးတာဝန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အချိန်ဇယားအတိုင်းတိုက်ရိုက် command ကိုကျင့်သုံးရန်အတွက်ကြီးမားသောစီစဉ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုအရည်အသွေးမပြည့်မီဘဲထိန်းသိမ်းထားသည်.
အကယ်. သင်သည်အချို့သော tile ကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသော tile style options များကိုရှာဖွေနေပါကသင်၏ရှာဖွေမှုသည်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်. သင့်တွင်အကြံဥာဏ်များသို့မဟုတ်မေးမြန်းချက်များရှိပါကသင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာရှိနေသည်.
"အရည်အသွေး, စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဟာအပြန်အလှန်သီးသန့်မရှိတာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်ခဲ့တယ်. တကယ်တော့ငါတို့အတူတူစည်းရုံးတယ်, သူတို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေအတွက်တိုးတက်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်တယ်. ပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်း Cruso Granito သတိရှိရှိဤရည်ရွယ်ချက်များကို ဦး တည်သည်, ၎င်းတို့၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီကိုယ်နှိုက်ထက်ကျော်လွန်သူမွေးစားခြင်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း.
အနာဂတ်အတွက်အစိမ်းရောင်ဗိသုကာဆိုင်ရာစံနမူနာရှင်များမှာအဆောက်အအုံများမဟုတ်ဘဲလူနှင့်ပတ်0န်းကျင်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအပေါ် မူတည်. အဆောက်အအုံများမဟုတ်ဘဲအဆောက်အအုံများမဟုတ်ပါ. ဤအသိုင်းအဝိုင်းများကို "Ecovillages" ဟုလူသိများသည်. ရပ်ရွာအခြေပြုလူမှုရေးဂေဟဗေဒပုံစံအသစ်များသည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည်. ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု - အကာအကွယ်ပေးထားသောဘဝအရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်လူမှုရေးပြ issue နာတစ်ခုဖြစ်သည်.